स्वस्थ्य जीवनका लागि जरुरी छ खानपानका यी आनीबानीहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
स्वस्थ्य जीवनका लागि जरुरी छ खानपानका यी आनीबानीहरु !!
अब तपाईलाई पनि कसरी स्वस्थ रुपमा खाने भन्ने परेको होला । स्वस्थ खाना खानको लागि अपनाउनुपर्ने १५ सजिला तरिकाहरु यस्ता छन्ः
तपाईले खानाको लागि मासु किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाई प्रशोधन नगरिएको मासु रोज्नुहोस् । तपाईले मासु किन्दा ससेज, स्ट्रिप्स, स्लाइस खोज्नुहुन्छ भने त्यो राम्रो होइन किनभने त्यसमा स्वस्थ पोषणतत्वको सट्टामा सोडियम र प्रिजर्भेटिभ्स पनि थपिएको हुन्छ । (अनलाइनखबर बाट सभार)
दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकामा पहिरोमा पुरिएर एक महिला बेपत्ता